Ahoana ny fanarenana ireo sary, horonan-tsary ary mozika voafafa avy amin'ny kapila mafy | Vaovao momba ny gadget
Taona vitsy lasa izay, raha teo an-tampon'ny DVD ny DVD ho tahiry fitehirizana, maro amintsika no mpampiasa nividy DVD be dia be mba hanao kopia voafafa, hitahiry sary, fampiharana, sarimihetsika, mozika ... saingy noho ny famakiana miadana sy ny fihenan'ny vidin'ny kapila mafy, ankoatry ny fandrosoana nateraky ny fahatongavan'ny broadband, maro amintsika no mpampiasa izay misafidy ny hampiasa tahiry fitahirizana hafa izahay, kapila haingana kokoa ary toerana fitahirizana bebe kokoa.
Mba hitazomana ny fampahalalana ao amin'ireo singa fitehirizana samihafa misy, dia mila mitandrina baiko aloha isika mba hahitantsika mora foana izay tadiavintsika ary koa hiezahana tsy hamerina atiny ao amin'ilay singa iray ihany. Saingy mety misy fotoana sy fampiasana ireo karazana unit ireo manomboka manome olana miasa na mety manao fahadisoana isika ary mamafa ny zavatra tadiavintsika fa mieritreritra fa manana kopia any an-kafa isika.
Eto izy io, izay ahazoantsika vongan-tsofina, indrindra raha ny fampahalalana nofafantsika dia tsy hita tao amin'io fitaovana io ihany, ary tsy manana kopia na amin'ny rahona isika, na ny kapila mangirana na ny toerana hafa, avy any isaky ny fotoana ary miankina amin'ny karazana fampahalalana tianay hotehirizina, soso-kevitra ny hanohy hampiasa ireo DVD, na raha tsy mahomby izany, Blu-ray, izay ahafahantsika mitahiry tahirin-kevitra betsaka kokoa, tsy misy atahorana ho voafafa tsy nahy.
Raha tonga hatreto ianao dia mety noho ianao nandray anjara tamina olana izay ezahanao ivoahana, olana mifandraika amin'ny antontan-taratasy, sary, mozika, horonan-tsary ... no voafafa (ndao lazaina toa ity) tsy nahy. Soa ihany fa miankina amin'ny système d'exploitation ampiasaintsika, afaka mahita fampiharana be dia be isika mamela antsika hamerina vaovao voafafa.
1 Fampiharana hamerenana sary, horonan-tsary na mozika voafafa avy amin'ny kapila mangarahara, pendrive na karatra fahatsiarovanay
1.2 Undelete 360 ​​(Windows)
1.3 Maimaim-poana ny sary rehetra fanarenana (Windows sy Mac)
1.5 Pandora File Recovery (Windows)
1.6 MiniTool Data Recovery (Windows sy Mac)
1.8 Undelete Plus (Windows sy Mac)
Fampiharana hamerenana sary, horonan-tsary na mozika voafafa avy amin'ny kapila mangarahara, pendrive na karatra fahatsiarovanay
Amin'ny Internet isika dia afaka mahita fampiharana marobe izay mamela antsika hamerina vaovao tena sarobidy amintsika ka voafafa tsy nahy isika. Afaka mahita fampiharana maimaimpoana sy maimaim-poana isika, na dia matetika aza ity farany dia manararaotra ny famoizam-po ataon'ny mpampiasa hanolotra ny fangatahany amin'ny vidiny manararaotra. Na izany aza, raha miresaka momba ny rindranasa maimaimpoana ahafahantsika mamerina vaovao voafafa afaka mahita safidy hafa mahomby izay hanavotra antsika amin'ny olana mihoatra ny iray isika.
Tadidio fa tsy maintsy tanterahina ny fizotrany raha tsy nampiasa ny habaka tamin'ny fitaovana fitahirizana intsony izahay taorian'izay hitahiry fampahalalana bebe kokoa, satria ireo sehatra nisy ilay fampahalalana dia mety efa naverina nosoratana ary tsy azo alaina intsony ilay fampahalalana.
Ity rindranasa ity dia iray amin'ireo tranainy indrindra izay azontsika hitadiavana ireo angon-drakitra izay nofafantsika avy amin'ny fitaovam-pitahirizanay, na kapila mafy, karatra fitadidiana na pendrive io. Na dia marina aza fa voaloa, Misy vidiny 19,95 euro, ity dia iray amin'ireo fampiharana vitsivitsy izay miasa mahafinaritra sy Tsy mpamitaka toa ny hafa no ahitantsika sarany. Na dia manome antsika kinova maimaimpoana aza izay afaka manavotra antsika amin'ny olana raha tsy te-hamakivaky ilay boaty isika.
Undelete 360 ​​(Windows)
Undelete 360 ​​dia miorina amin'ny anarany DOS command izay ahafahantsika mamerina rakitra voafafa ao amin'ny rafitra fiasan'i Microsoft tamin'ny voalohan'ny taona 90, talohan'ny nahatongavan'i Windows. Undelete 360 ​​dia ahafahantsika mamerina karazana rakitra rehetra aorian'ny famakafakana tanteraka ilay singa, na kapila mafy, karatra fahatsiarovana na pendrive na azontsika atao ny mampifandray ilay fitaovana nisy ny sary (fakan-tsary na sary fakan-tsary) mivantana hiandraikitra ny famakafakana ny rafitra. dia azo alaina maimaim-poana.
Maimaim-poana ny sary rehetra fanarenana (Windows sy Mac)
Ny famerenana maimaimpoana ny sary dia mamela antsika ho sitrana amin'ireo rakitra sarimihetsika, fisie mozika taloha, na sary na fisie. Azontsika atao ny mampiasa azy io mivantana avy amin'ny fitaovana, na fakan-tsary niomerika, finday Android, pendrive io. Izy io dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny mpanamboatra fitaovana sy karatra fitadidiana. Inona koa, manolotra anay topi-maso ny sary, horonan-tsary na horonam-peo fa te-ho sitrana izahay hijerena raha mendrika ny ho sitrana na tsia. Ny Free Any Photo Recovery dia manome antsika kinova karama miaraka amina fiasa bebe kokoa, fa amin'ny fototra dia afaka mamerina ampahany betsaka amin'ny atiny very isika. Azo ampiasaina ho azy roa ity fampiharana ity Windows fa ny Mac.
ZAR dia rindrambaiko maimaimpoana mamela antsika hamerina izany mifantoka amin'ny famerenana sary voafafa ny karatra fahatsiarovantsika na pendrive, na dia miasa miaraka amin'ny kapila mafy ivelany aza izy io. Raha te-hamerina horonan-tsary na rakitra izahay dia tsy io no tadiavinao ity rindranasa ity.
Pandora File Recovery (Windows)
Pandora File Recovery dia manadihady ny kapila ataontsika sy ireo kapila nampifandraisintsika taminy handinihana ary asehoy anay ny fanondro misy ireo rakitra sy lahatahiry voafafa, mba hahitantsika mora foana ny fampahalalana tiana haverina raha mbola fantatsika ny toerana misy azy. Ny Pandora File Recovery dia ahafahantsika mamerina rakitra miafina, manana takelaka, rakitra voahidy, sary, antontan-taratasy, sarimihetsika ary karazana rakitra hafa. Izy io dia manohana ireo rafitra fitehirizana FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS5 ary NTFS / ES. Pandora File Recovery dia azo alaina maimaim-poana.
MiniTool Data Recovery (Windows sy Mac)
MiniTool DataRec Recovery dia tsy mamela antsika hamerina sary voafafa na voafafa, horonan-tsary ary rakitra hafa avy amin'ny kapila mangirana, kapila USB na karatra fitadidiantsika, fa koa manolotra antsika ny mety hamoronana kapila boot hamerenana ny fampahalalana avy amin'ny kapila mangirana raha toa ka manome olana ny rafitra miasa ary tsy afaka miditra amin'ny atiny izahay. Ity rindranasa ity dia iray amin'ireo lafo indrindra hitantsika mba hamerenana ireo rakitra voafafa, na dia izany aza manolotra anay ny fahafahan'ny misintona kinova maimaimpoana miaraka amin'ny fetrany hahafahanay manamarina ny fahombiazan'ny fampiharana na tsia.
Tsy ireo mpampiasa Windows sy Mac irery no afaka mandona ny fisie sy manala azy ireo. Ireo mpampiasa Linux, na dia vitsy aza izy ireo, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fatiantoka na famafana data. R-Linux dia fitaovana maimaimpoana, que mamela antsika hamerina fisie voafafa na simba amin'ny fizarazarana Linux EXT2, EXT3 ary EXT4 ary koa amin'ny fizarazarana FAT32 sy NTFS. Ny R-Linux dia mamela antsika hametraka sivana hahitantsika ny atiny tadiavintsika nefa tsy mila manamarina rakitra amin'ny alalàn'ny rakitra izay tena ilaintsika. Mety ho an'ny mpampiasa efa mandroso izy io, satria ny safidy fanamboarana sy fikarohana dia mitaky fahalalana be dia be indraindray
Undelete Plus (Windows sy Mac)
Tsy toy ny ankamaroan'ny rindranasa nasehoko anao tamin'ity lahatsoratra ity, Undelete Plus dia iray amin'ireo fampiharana vitsy izay misy amin'ny teny Espaniôla, mety ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy zatra ireo teny mahazatra amin'ny solosaina amin'ity lafiny ity. Undelete Plus dia mamela antsika sitrana izay karazana rakitra voafafa tao amin'ny fitahirizan-tsinay ao anatin'izany ny mailaka sy ny entana avy amin'ny fitoeram-bokatra. Undelete Plus dia azo alaina maimaim-poana ary tsy manolotra anay kinova Pro izay tsy maintsy hamoahana vola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny sary voafafa, horonan-tsary ary mozika voafafa
Azonao atao izao ny mividy ny NVIDIA Shield TV vaovao any Espana